LIVE Transfer Hurukuro: Arsenal inogona kuwana Coutinho ye £ 9m asi Barca vanoda Guendouzi - Techip RELAY
The coronavirus denda yaita kuti musika wekutamisa uve usina chokwadi - uye unogona kuziva kuti windows dzinovhura pano - asi heino runyerekupe rwuri kuyenderedza pamakungu makuru eEurope uye kupfuura.
TOP Nhoroondo: Arsenal kubata Coutinho mutengo 'wekutengeserana' mutengo
Barcelona castaway Philippe Coutinho anogona kunge ari munzira kuenda zvombo kwemamirioni masere chete - - asi chete kana Barca ichikwanisa kuwana Matteo Guendouzi mune chinja chekuita.
Iyo Independent inoshuma kuti maGunners boss Mikel Arteta anogona kuva neya-Liverpool kumberi muchikwata chake chinotevera mwaka, mushure mekunge apedza mari yekukwereta Bayern Munich.
Kukurukurirana pakati peArsenal neBarcelona kuri mumatanho ekutanga, asi kukunda mumakundano eFA Cup pakupedzisira Chelsea (Fambisa LIVE paESPN +: Mugovera, 12:30 pm ET, US chete) ichawedzera zvakanyanya bhajeti raArteta uye zvimwe ichaita nzira yekutengesa.
Kuchinjana hakufanire kuve nyore, asi, wakapihwa izvozvo Juventus vanofarirawo Guendouzi. Chirevo chinotaura kuti Arsenal iri kuongorora mukana wechinjiko chechinjiro neChitaliya mukirabhu zvakare.
16.45 BST: Borussia Dortmund winger Jadon Sancho Tarenda chairo, hazvishamisi kuti Man United inomuda sei.
Craig Burley anoongorora mabatiro aachaita Jadon Sancho muchikwata cheManchester United kana apedza kuOld Trafford.
16.02 BST: Naples mukuru Aurelio de Laurentiis anodaro uyo nyeredzi adziviriri Kalidou Koulibaly ichaita € 90m kana paine kirabhu iri kuda kumusayina.
Koulibaly, makumi matatu nemasere, anga achibatana neyechirimo kufamba kuenda Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, PSG uye Bayern, pakati pevamwe.
"Kalidou munhu anoshamisa uye zvingave zvinosiririsa kurasikirwa naye," De Laurentiis akaudza Sky Italia. “Zvese zvine nguva nenzvimbo, kunyangwe zvasvika pakufamba kwedu takaparadzana.
"Sezvo tataura izvozvo, isu hatina € 90m (£ 81m) patafura uye mune chero mukana, zvinotora zviviri kupatsanura. "
14.55 BST: Oldham Athletic vakagadza aimbove Liverpool uye Leeds United winger Harry Kewell semaneja wavo mutsva zvichitevera kutengeswa kwa Dino Maamria.
Chikwata ichi chakazivisa neChishanu kuti Maamria achasiya kirabhu mushure memwedzi gumi achirangwa uko akahwina mitambo mishanu chete kubva pamakumi matatu neshanu.
Kewell akapihwa chibvumirano chegore rimwe chete nekirabhu sarudzo yekuwedzera.
14.51 BST: Gazzetta Dello Sport inoshuma kuti Inter Milan inoda kupa Lionel Messi a € 66m pamwaka webhadharo dhizaini kuti ubatane navo pane yakasununguka yekutumira.
Iye wemakore makumi matatu nematatu anogona kubva Barcelona apo chibvumirano chake chinopera muna 2021, neSerie A parutivi vachiisa pamwechete € 265m pakeji yemakore mana-chibvumirano.
Nekudaro, hazvitomboitika kuti Messi abva kuCamp Nou, kana kuti Inter inogona kukwidza mari yakawanda iyoyo.
Nokuda kwenhoroondo, maererano neForbes, Messi ndiye mutambi akanyanya kubhadharwa munyika sezvaanowana kutenderedza € 60m pagore mumubhadharo, ne Juventus' Cristiano Ronaldo uye PSG Neymar unowana zvishoma zvishoma.
14.26 BST: RB Salzburg yakavhurika kutengesa Dominik Szoboszlai kweye kutenderedza € 30m iwindo rezhizha, maererano nepepanhau reAustria Salzburger Nachrichten.
Szoboszlai, 19, akatarisirwa zvakanyanya asi kirabhu iyi ine nhoroondo yekutengesa tarenda ravo repamusoro - Erling Haaland kuDortmund uye Takumi Minamino kuenda kuLiverpool - mumakore achangopfuura.
Chelsea uye zvombo vanonzi vanofarira, ne AC Milan, Manchester United uye Atletico Madrid zvakare kuongorora Hungary.
13.56 BST: Ndeipi Tanguy Ndombelemanyepo emangwana? Pamwe kwete kuTottenham.
Stewart Robson anotsanangura kuti sei yave nguva yaTanguy Ndombele kuti afambe kubva kuna Jose Mourinho naSpurs.
13.15 BST: Apa ndipo panowanikwa mamwe emamiriyoni makumi manomwe nemakumi mairi iyo Lille ndakaitirwa Victor Osimhen akaenda ...
18 -ne makore ekuMexico ane makore ari pakati Eugenio Pizzuto Joins kubva kuPachuca. Zvimwe achave akakosha € 70mm mumakore mashoma.
13.00 BST: ESPN's Insider Notebook ine zvimwe zvinonakidza kutama angles vhiki ino.
- Ole Gunnar Solskjaer anoda kuti Manchester United ikurumidze kutsvaga kwavo Borussia Dortmund Mberi Jadon Sancho kuitira kudzivirira kudzokorora kwekupedzisira kwezhizha kwekushambadzira kwekufamba Harry Maguire, izvo zvakaita kuti kirabhu ibhadhare rekodhi yepasi rose $ 80m yeiye Leicester defender.
Sangano raudza ESPN's Mark Ogden kuti United iri pachinzvimbo chekuti isayine Sancho chirimo chino, asi kushomeka kwevatsigiri vemakore makumi maviri nesainzi kwakaita kuti veOld Trafford varatidze kuti vanogona kudzikisa mutengo weDortmund we $ 20m aimbova wechidiki weManchester City.
- Chelsea neManchester City vari kunyatsotevera kuvandudza kweAtletico Madrid's Jose Maria Gimenez, zviwanikwa zvataudza ESPN's Rodrigo Faez, asi tatarisana nehondo yakaoma kusvika pasi pe120m-yakatemerwa nzvimbo-kumashure.
- Lazio yakaita hurukuro David SilvaMusasa kuRome svondo rapfuura mukuedza kuti mutambi weManchester City abatane nechikwata ichi pakutungamirwa zhizha rino, masabhuku akaudza ESPN's Moises Llorens.
12.34 BST: PSG yakaendesa € 30m inopihwa kuna Bayern Munich yemukati wepakati Thiago Alcantara, inodaro Le10 Sport.
Thiago, makumi matatu nemasere, anga achirangwa neLiverpool kubvira paakaratidza kuti aisazosaina chibvumirano chitsva kuBayern kutanga kwezhizha rino.
Nekudaro, Reds haidzingirire kufamba kwaari, masosi ataura ESPN's Mark Ogden, aine makundano ePremier League anongogona kupinda mumusika wekutamisa kana nhengo yakakosha yechikwata chaJurgen Klopp ikasiya Anfield.
Izvo zvinosiya nzira yakajeka yePSG.
12.02 BST: Sergi Robertozita rakadzokororwa mukutaura pakati peBarcelona neManchester City zhizha rino, maererano Diario Sport. Makirabhu maviri aya anonzi arikutaurirana nezve zvibodzwa zvakati wandei, neCity kubvunza nezvaRoberto sezvavanowona mutsva-kurudyi.
Guta neBarca vakasununguka kukurukura nezve zvingangoita chinja chekuita chinosanganisira kuzara-kumashure Nelson Semedo uye Joao Cancelo, asi Speini pasi rose Roberto, nekuda kwekuita kwake zvakasiyana, zvinonzi zvinonyanya kufadza timu yePremier League.
Sport inowedzera kuti hurukuro dzakaitikawo maererano Eric Garcia, iyo yepakati-kumashure iyo yakabatana neCity kubva kuBarca muna 2017. Wechidiki anga aine gore rimwe chete rekumhanyisa pachibvumirano chake mukati England.
Zvichakadaro, Samuel Umtiti arikuchera zvitsitsinho mukati uye aramba kubva muBarcelona, ​​maererano neshumo mukati mutambo. Mutambi weFrance mumwe wevatambi vemuCatalan mukirabhu akavhurika kutengesa chirimo ichi asi arikuda kugara paCamp Nou.
Umtiti, makumi maviri neshanu, ane chibvumirano kusvika 26 asi tambo dzevakakuvara kubva muna 2023 vamuona achiwira pasi, uye Clement Lenglet zvino anodiwa padivi Gerard Pique pakati pemashure mana.
Barca, saka, vari kuda kutengesa Umtiti kuunza mari yekusimbisa nhandare kumwe kunhu. Asi iyo nzvimbo-kumashure inotarisana nekuwana zvakare kuzara kwakasimba uye kukunda nzvimbo yake kudzoka muchikwata cheQuique Setien.
11.31 BST: Chelsea inoda nzvimbo-yekudzosera asi vane mari inokwana mushure mekushandisa kwavo nguva pfupi yapfuura kutunda kuAtletico Madrid's Jose Gimenez?
Don Hutchison anoti Frank Lampard anofanirwa kugadzirisa mutsara wekirabhu kumashure kumashure pakati paJose Gimenez.
11.00 BST: Akakwira-akakwenenzverwa weTottenham Troy Parrott akatamira kuMillwall pachikwereti chemwaka wa2020-21.
10.44 BST: David Beckham's MLS franchise Inter Miami yaita zvekupa Chelsea winger Willian, anodaro Sky Sports.
Willian, makumi matatu nemasere, anotaridza kusimuka kubva kuChelsea sezvo kirabhu iri kungomutambidza makore maviri paari kuda vatatu. Arsenal yakabatanidzwa, nepo Barcelona ichiratidzirwazve kuti yavakaita kombi yekumuunza kuCamp Nou.
10.40 BST: Chris Basham ane akasaina chibvumirano chitsva at Sheffield United kusvikira 2022.
10.04 BST: Manchester City pakati-kumashure Eric Garcia achangobva kuita iyo yekubudirira kune yekutanga-timu asi iye ave kutobatanidzwa neyekufamba kwezhizha.
Garcia, 19, ikozvino ndiyo yepamusoro sarupu yekutamisa yeBarcelona zvichienderana chinangwa.
Wechidiki wekuSpain akasiya Barca's La Masia academy makore matatu apfuura asi iye zvino anowedzerwa mukana wekudzoka sezvo chibvumirano chake kuCity chinopera muna 2022.
09.29 BST: Manchester United inogona kuve mushure meye Borussia Dortmund nyeredzi Jadon Sancho asi Bhiridha unoshuma kuti iyo kirabhu yeGerman iri kuona inotsiva kutsiva.
Chokwadi, Dortmund vanoda kuumba Manchester United winger Memphis Depay kubva Lyon.
Iye ane makore makumi maviri nemashanu ekuzvarwa akaorora mukati Furanzi uye anonzi akagadzirira kutora danho rinotevera rebasa rake.
09.00 BST: Napoli vapedza kusaina kwe mberi Victor Osimhen kubva Lille, kirabhu yakazivisa neChishanu.
"SSC Napoli vanofara kuzivisa saVictor Osimhen kubva kuLille kana vachinge vatamiswa zvachose," nhabvu yekuItaly ikataura.
Mutungamiri weNapoli, Aurelio De Laurentiis akaudza Gazzetta dello Sport kuti chibvumirano chekirabhu chemitero chinobhadhariswa kirabhu ye- € 70m pamwe neimwe € 10m mumabhonasi.
ESPN FC Steve Nicol anotsanangura zvikonzero zvishoma nei Nathan Ake angasave akakodzera kuManchester City.
PAPER TALK (naShaun Reynolds)
Wilson kutevera mutsoka dzaAke?
Kwapera vhiki Bournemouth'kusunungurwa kubva kuPremier League, Cherries' nyeredzi inoridza Callum Wilson inoratidzika kunge iri pedyo nekuchengetedza kubuda kubva kuVitality Stadium.
• Mashandiro emusika wezhizha anoshanda sei
• Kuper: Coronavirus maitiro kune vanochinjiswa
• Kufamba kwaBarnell kwakanyanya: 100-51 | 50-1
• Kwakanaka chirevo kusaina
• Makiriniki ekuchinjisa mamakisi
• Nguva pfupi yapfuura yakashandurwa makuru ekuchinjiswa
The Telegraph anoti Wilson, makumi masere nemasere, akaudza vatambi vake kuti anoona kutamba muPremier League kwakakosha kana achivaka basa rake rekunze.
Tottenham Hotspur vanonzi vari kutungamira mujaho kuhwina Wilson kure neBournemouth, vanoiswa pakutadza kudzivirira Nathan Ake to Manchester City yeanopping $ 41m.
Wilson akarova zvibodzwa zvisere mumitambo makumi matatu nemashanu yePremier League mwaka wadarika.
Tofies '£ 18m Regulion bhiza inogona kuyedza Madrid
Sky Sports inotaura izvozvo nhamajo tungamira mujaho kuchengetedza masevhisi e Real Madrid kuruboshwe-kumashure Sergio Reguilon, achiwedzera kuti £ 18m bhadha yaiswa kune iyo makumi maviri nemasere-gore.
Reguilon wekuMadrid anofarira fan yakakwezva kufarira kwenzvimbo dzinoverengeka dzePremier League, asi iwo mukombe weToffes wekupedzisira anogona kuyedza kirabhu yeSpanish kuti ipindirane nemuchinda wavo akapedza kudzidza. Chikamu chechikonzero chiri kumashure kwekubvira kwaReguilon ingangove mari, nemishumo yekuti Madrid inofanirwa kukwidza £ 180m zhizha rino kuyera mabhuku.
Zvichakadaro kuMerseyside, Carlo Ancelotti anoshuvira kusaina Regulion setsiva iye achangobva pamudyandigere Leighton Baines.
- A-isina-inodziya-inodziya Premier League anotambira anogona kukwazisa Brentford kana vakarova Fulham mumakwikwi eChampionship playoff ekupedzisira neChipiri. Imhaka yekuti chinangwa chechabhu Folarin Balogun - mutambi wemakore gumi nematatu kuArsenal - anokwenenzverwa £ 19m, maererano neSky Sports. Nyuchi dzinogona kuona kuti sezvo yakanyanyisa mutengo weBalogun, ichiri kuita chitarisiko chepamusoro cheGunners.
- Jeremy ngakia inoita kunge yakasimudza dzimwe maziso West Ham United sezvo wechidiki anonzi anga afunga kusiya dhara obatana Watford. Sekureva kwa Guardian, uyo ane makore 19 okukura akanzwa ramangwana rake risiri kuLondon Stadium uye panzvimbo iyoyo achaedza rombo rake neChikwata cheMakwikwi akasungwa.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/blog-transfer-talk/story/4150331/live-transfer-talk-arsenal-can-get-coutinho-for-9m-but-barca-want-guendouzi
Mushure mekupaza, Virusi Inokwira Nyowani muMaswest - New York Times